जापानको जस्तै भूकम्प गए के होला ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← आम माफी (एमनेष्टी) सम्बन्धमा नेपाली राजदूतावास कुवेतबाट थप जानकारीसहित सूचना !!
कोलम्बियामा नेपाली रेस्टुरेन्ट →
Posted on 12/03/2011 by डम्बर 'माइला' | १ टिप्पणी
फाल्गुन २८ – जापानमा शुक्रबार गएको जस्तै भूकम्प गयो भने काठमाडौंमा मात्र दुई लाखभन्दा बढीको मृत्यु र दुई लाखभन्दा बढी घाइते हुने आँकलन छ । देशभरिमा मृतकको संख्या करिब चार लाख नाघ्ने र चार लाख घाइते हुने अनुमान गरिएको छ ।’यो एक मिनेटको थकर्नपछि हुने दैवीप्रकोपको आँकलन हो,’ भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजका कार्यकारी निर्देशक भूकम्पविद् आमोदमणि दीक्षित भन्छन्, ‘अस्पतालमा आकस्मिक उपचार दिने व्यवस्थासमेत हुँदैन ।’ विज्ञहरू भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिले नेपालजस्तो संवेदनशील मुलुकमा पूर्वतयारीसँगै भूकम्पबाट बाँच्ने कला सबैले सिक्नुपर्ने बताउँछन् । भूकम्पविद्ले यो क्षेत्रमा कुनै पनि बेला शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने बताउँदै आएका छन् । मुलुकमा हरेक ७५ देखि सय वर्षमा विशाल भूकम्प र हरेक ५० वर्षमा मध्यम भूकम्प गएको इतिहास छ ।
राजधानीको जनसंख्या’bout हालसम्म आधिकारिक तथ्यांक नरहे पनि विज्ञहरूले ४० देखि ६० लाख व्यक्ति बसोबास गरिरहेको अनुमान गर्छन् । उपत्यकाको वास्तविक घर संख्या’bout समेत कुनै तथ्यांक उपलब्ध छैन । ‘उपत्यकामा करिब पाँच लाख घर भएको आँकलन गर्न सकिन्छ,’ दीक्षित भन्छन्, ‘तर भूकम्पबाट जोगाउने भवन निर्माण संहितालाई कडाइ साथ लागू गर्न सकिएको छैन ।’ काठमाडौंको दरबार स्क्वायर कुनै पनि ठाउँबाट हेर्दा नौ/दस तल्ले घर देखिने गरिएको औंल्याउँदै दीक्षित भन्छन्, ‘तर त्यो इलाकामा पाँच तल्लेभन्दा बढी अग्लो घर बनाउने मापदण्डै छैन, भूकम्प जाँदा यस्ता अग्ला घर पछि चिहान बन्नेछन् ।’
नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकमा भूकम्पीय विनाशको मुख्य कारण घरलगायतका कमजोर संरचना भत्किनु हो । आचारसंहिताअनुसार घर बनाउँदा तीनदेखि पाँच प्रतिशत बढी रकम खर्च भए पनि भूकम्पबाट भने मृत्यु हुने सम्भावना अति न्यून हुन्छ । ‘संहिताअनुसार निर्माण गरिएको घरले ९ एमएमआईसम्म थर्कन थेग्न सक्छ,’ उनी बताउँछन् ।
भूकम्पीय हिसाबले नेपाल जोखिमपूर्ण सूचीमा छ । त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यका सबैभन्दा खतरामा छ । भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले विश्वमा नेपाल ११ औं स्थानमा पर्छ । नेपालमा ८.२ रेक्टरसम्मको भूकम्प जान
सक्छ । जुन निकै ठूलो हो । नेपालमा मेचीदेखि महाकालीसम्म जुनसुकै ठाउँमा भूकम्प जान सक्छ । भूकम्प गयो भने सबभन्दा बढ्ता धनजनको क्षति काठमाडौंमा हुनेछ । भूकम्पीय हिसाबले काठमाडौंको भौतिक संरचना निकै कमजोर छ ।
१९९० सालमा नेपालमा ९/१० एमएमआई (मोर्डिफाइड मर्सेली इन्टेन्सिटी) बराबरको भूकम्प गएको थियो । त्यतिबेला पनि निकै विनाश भएको हो । नेपालमा १२ एमएमआईसम्मको भूकम्प जान सक्छ । नेपालको भौतिक संरचना हेर्ने हो भने ७ एमएमआईभन्दा बढीको भूकम्प थेग्न सक्ने भौतिक संरचना छैनन् । कम्तीमा पनि ९ एमएमआईसम्मको भूकम्प थेग्ने घरहरू बनाउन सकिए धनजनको क्षति न्यून हुन सक्छ । सरकारले पनि त्यतातिर अलि बढी ध्यान दिन जरुरी छ । शुक्रबार जापानमा गएको जत्तिको होइन, १९९० साल जत्तिकै भूकम्प गए पनि काठमाडौंमा ६० प्रतिशत घर भत्किन सक्छन् र लाखौं मानिसको ज्यान जान सक्छ । त्यस्तै, पुल र विमानस्थल पनि सखाप हुन सक्छन् । त्यतिबेला आर्थिक नोक्सानीको कुनै मूल्यांकन नै गर्न सकिन्न ।
Posted By:DPR Source: ekantipur
One response to “जापानको जस्तै भूकम्प गए के होला ?”
anjit rijal | 19/04/2011 मा 3:14 बिहान |